एनआरएनए एनसिसी खम्बा हुन् भन्दै तिनकै गला रेट्ने ? :: NepalPlus
डा. हेमराज शर्मा / बेलायत२०७८ चैत ११ गते ८:५३
नेपाल सरकार र नेपालका पार्टीहरुलाईपनि मेरो बिनम्र अनुरोध छ- तपाईहरुका मात्रै भात्री संगठनका मान्छेहरु राखेर संगठन बनाउने हो भने एनआरएन चाहिँदै चाहिन्न । तपाईहरुको छ त । जनसंपर्कको ३५, ४० देशमा होला । प्रवाशी नेपाली मञ्च, माओवादी, राप्रपा सबैको छ । त्यत्तिले मात्रै हुने हो भने यो एनआरएन किन चाहियो ? आफ्नै भात्री संगठन छ नी । आफ्नै संगठनलाई तपाईहरुले ब्यवस्थित गर्नुस् न ।
तर त्यो होइन । हामी बाहिर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली हौं । हामी एनआरएन हौं । मैलेपनि एउटा कुनै पार्टीलाई भोट हाल्छु । त्यसमा कुनै अन्यथा लिनुछैन । तर हामी बाहिर आइसकेपछि यो एनआरएनए भन्ने संस्था साझा हुनसक्छ । सबैलाई अटाउनसक्छ भनेर हामी यसमा लागेको हो । पार्टीले मात्रै गरेर हुने हो भने गरिराखेको छ नी त । तर बाहिर ति पार्टीमा संलग्न भएका मानिस कति छन् ?
६० लाख नेपालीमा हाम्रो सदस्यनै जम्मा एक लाख ६ हजार सदस्य छन् । ९८ प्रतिशत त बाहिरै छौं अझै । पार्टीका मान्छे राख्नुभयो भने त केहि हजार मात्रै छन् । त्यो हजारको संख्यामा भएका मान्छेले मात्रै यो साझा संस्था हुन्छ ? त्यतिले मात्रै हुने हो भने हिजो सिमा सुरक्षा देखि लिएर भारतले नाकाबन्दि लगाउँदा ६० भन्दा बढी देशका भारतीय राजदुतावासमा हामीले चिठी पठायौं । प्रदर्शन गर्‍यौं । एनआरएनएको शक्तिले गरेको हो नी !
यस अघिको पहिलो भाग : आसेपासेका कुरा सुनेर ६० लाख नेपालीको संस्था चलाउने ?
नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्छु, कोभिडमा तपाईहरुले बाहिर भएका नेपालीलाई सहयोग गर्न सक्नुभएन । हाम्रो श्रमिकहरुले तिरेको कोषमा अरबौंको पैसा छ । त्यसमा बल्लबल्ल गरेर ७० लाख रुपियाँ दुतावासमा पठाउनुभयो । राजदूतहरुले ‘ल मलाई अख्तियार लाग्छ’ भनेर टाढा टाढा हुनु भयो र त्यहि पैसापनि खर्च गरिदिनुभएन । हामीले १० करोड त आइ एलओबाट मात्रै जाने बनायौं । अरु बाँकी गोजीबाट कति खर्च भएहोला ? सरकारमा जहाँ जहाँ खालि ठाउँ छ, सरकार असमर्थ छ, त्यहाँ हामीले सहयोग गरिराखेका छौं ।
केहि समय अघि ग्रिसबाट टर्की आउँदा छ जना नेपालीको मृत्यु भएछ । चार जना वर्क परमिटमा गएका थिए रे । दुई जनाको थिएन । तर ति सँगै गएका । एकै कार्यक्रममा । दुई जना वर्क परमिटमा गएका थिएनन् भनेर ति दुई जनाको लास त्यहिं छोड्यो सरकारले । हामीले उठाउनुपर्‍यो ।
युक्रेनमा समस्या भयो । पाँच सय भन्दा बढी नेपालीलाई हामीले सहयोग गर्‍यौं । उद्धार गर्‍यौं । त्यहाँ नेपाली दुतावास त थिएन । पोल्याण्ड, स्लोभेनियामा हाम्रो दुतावास थिएन । तर हामी त्यहाँ थियौं । यो खालको सहयोग नेपालका पार्टीलाई चाहिने हो कि होइन ? आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै खुशि पार्ने हो कि बाहिर बस्ने ९९ प्रतिशत हामी जस्ता गैर आवाशीय नेपालीलाई खुशि पार्ने हो ? त्यसैले तपाईहरुको त्यो दम्भपनि छोडिदिनुस् । साँच्चिकै राष्ट्रको लागि चाहिने हो भने एनआरएनएलाई यो राजनितिको चंगुलबाट निकालिदिनुस् ।
ठिक छ, तपाईहरुले प्रस्ताव ल्याउनु भो । म आजपनि भन्छु, अहिलेका सत्तारुढ दलका महामन्त्रीजीहरुले हामीलाई अनुरोध गर्नु भो, ‘तपाईहरु मिलेर जानुस्’ । हामीलाई ठिक छ, सबै नेपालीको साझा बनाउने भनेर हामीले सकारात्मक पहलपनि लियौं ।
पूर्व संरक्षक ज्युले वार्ता कमिटी भनेर बनाउनुभएको छ । आफ्नो अनुसार रिपोर्ट बनाइदिएको छ । यहाँ भन्ने बेलामा चाहिं ‘एनसिसीलाई सशक्तिकरण (इमपावर) गर्नु पर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ, एनसिसी हाम्रा खम्बा हुन्’ भन्ने । तपाईहरुले जे पठायो हमीले त्यहि मान्नुपर्ने ? नारा ठूलाठूला छन् । अनि हङकङमा सयमा ९० प्रतिनिधि घटाइदिने ? ओमानमा ११० मा १० कायम गरिदिने ? एनसिसीलाई सशक्तिकरण गर्ने, बलियो बनाउने कहाँ गयो नारा ?
हिजो कोरोनाका बेला अक्सिजन प्लान्ट बनाउँदाखेरि आफ्नो पकेटको पैसा खर्च गरेर, एनआरएनएमा दिलोज्यान दिएका मान्छेहरुको नाम कटाउने तपाईहरुले ? अनि बाँकी रहेका मान्छेको नेता बन्न खोज्ने ? कसको नेता बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
त्यहि नौ सय घटाएपनि उहाँहरु निर्वाचनमा आउन सक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दैनथ्यो । त्यो बेक्कारको प्रचार (प्रोपोगाण्डा) मच्चाउन मात्रै हो । निर्वाचनबाट उहाँहरु आउनसक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैलाग्दैन ।
ठिक छ । अन्तिममा किस्तीमै चाहियो भनेपनि हामी दिन तयार हुनुपर्छ । चुनावमा नआएपनि, प्रक्रियामा नआएपनि एनआरएनएको एकताको खातिर, तपाई हाम्रो भावनाको खातिरपनि किस्तीमै चाहिएपनि हामी दिन तयार हौं । तर उहाँहरुको चाहना के हो भने हामी यहाँबाट हटिदिनुपर्‍यो । कसैलाई हेमराज मन परेको छैन, कसैलाई बद्रि केसी, कसैलाई रामशरण त कसैलाई यसमिनको नाम परिराखेको छैन । ति मान्छे यहाँबाट बाहिर गैदिनुपर्‍यो र उहाँलाई दिनुपर्‍यो ।
त्योपनि म ठिकै छ भन्छु । मैले टिमसित सल्लाह गरेको छैन । हामीलाई स्विकार हुने मान्छे ल्याउनुस् न त । छ तपाईहरुको ? कुलजी, रबीना जी, बद्रिजीलाई स्विकार गर्ने मान्छे ल्याउनसक्नुहुन्छ तपाईहरुले ? आफ्नो आसेपासे भन्दा बढी । ल हामी छलफल गर्न तयार छौं । कहाँ आउनुपर्ने हो । ल काठमाडौंमा छलफल गर्ने हो भने म आजै आउँछु । तपाईहरु एकदम स्पष्ठ हुनुस । यो भुलभुलैयामा लागेर हुन्न ।
हाम्रा एनआरएनएका केहि साथीहरुलाई म अनुरोध के गर्छु भने दाईलाई, कामरेडलाई, भाउजुलाई खुशि पार्नकोलागि एनआरएनएलाई धरापमा नपार्नुस् । त्यसकोलागि हामी तपाईहरुलाई साथ दिने पक्षमा छैनौं । खुशि पार्ने हो भने तल्लो तहका मान्छेहरुलाई खुशि पार्नुस् । हामी तपाईहरुको पछि लाग्छौं ।
तपाईहरुका केहि स्वार्थ होलान् । ब्यापारिक स्वार्थ होलान् । अरु स्वार्थ होलान् । प्रोजेक्ट सँगै होला । मैले यसलाई खुशि पारें भने म जस लिन्छु है भनेर पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो सोच्नुभएको छ भने त्यो नसोच्नुहोला । हामी दास छैनौं । हामी हाम्रो स्वतन्त्रतामा बाँच्न चाहन्छौं ।
एनआरएनमा साँच्चिनै बाहिर पार्नुहुन्छ भनेपनि नेपालमा समाजसेवा गर्न, स्कूल बनाउन, घर बनाउन कसैले छेक्नेवाला छैन । कार्यक्षेत्रमा गएर लास उठाउन केहिले छेक्नेवाला छैन । हामी हाम्रो काम गर्छौं । तपाईहरुका स्वार्थ कता कता छन् जानुहोला । तर जे छ त्यो भ्रम नपाल्नुस् । हाम्रोपनि ब्यक्तित्व छ । हाम्रापनि परिवार छन् ।
तपाईहरुका असेपासेका पत्रकारहरुलाई प्रयोग गर्ने, चरित्र हत्या गर्न छोडिदिनुस् । हामीलेपनि त्यो गर्न सक्थियौं नी त । त्यो गरेका छौं ? शेष दाईको बारेमा हामीले केहि लेखेका छौं नराम्रो ? लेख्न लगाएका छौं हामीले ? कुलजीको बारेमा लेख्न लगाएका छौं ? कुलजीको ईतिहास थाह छैन हामीलाई ? म यहिं बस्छु । एक एक थाह छ हामीलाई । हामीले किन लेखिराखेका छैनौं ? एकताको खातिर । तपाईहरुले दुई वर्षसम्म लगातार रुपमा हानेको छ हानेको छ । लेखेको छ लेखेको छ । कहिले जीवाजीलाई लेख्या छ त कहिले उपेन्द्रजीलाई लेख्या छ । तिनै मान्छेलाई वरिपरि राखेर, होस्ट बनाएर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई मिल्न आउनुस् भन्नुहुन्छ ?
जीवाजीलाई कति लेख्नु भयो ? उपेन्द्रजीलाई कति लेख्नु भो ? मेरो त कुरै छोड्दिनुस् । ति मान्छेलाई अपमान गर्नुहुन्छ तपाईहरुले । अनि तिनै मान्छेसित मिलेर, तिनलाई हिरो बनाएर, लगेर, कार्यक्रम होस्ट बनाएर कार्यक्रम गर्ने अनि हामीलाई मिल्न आउनुस् भन्ने ?
शेष दाईले सुन्नुभएको छैन भनेपनि वरिपरिका साथीहरुले सुन्नुहुन्छ होला । सुनाइदिनुस् । उहाँले त मलाई फेसबूकमापनि ब्लक गरेको जस्तो लाग्छ । पहिले त फेसबूकमै कुरा हुन्थ्यो ।
कुलजीलेपनि सुन्नुस् यो कुरा । कुलजी तपाईलाई अध्यक्ष बनाएर जान हामी तयारनै छौं । किस्तीमा राख्न तयार छौं । तर हाम्रा बारेमा, संस्थाको बारेमा त्यस्ता नराम्रा कुरा छोडिदिनुस् । तपाईका वरिपरिका पत्रकारले त्यसो गरेका छन् । यो संसार ठूलो छैन । तपाई हामी सँगै भात खाएर बस्या हो ! म लण्डन जाँदा तपाईकोमै बस्छु नी । तपाईका पत्रकार को हुन् । साथी को हुन्, कसलाई लेख्न लगाउनुहुन्छ हामीलाई थाह छैन ? जिम्मेवारी तपाईले लिनुपर्दैन ? हिजो एकताको बिरोधी भनेर फेरि तपाईहरुले छाप्नुभएको छ । एकता चाहियो भने पर्सि हुने कार्यक्रम बन्द गर्नुस् । यो लेखाउने कुरापनि बन्द गर्नुस् ।
झगडा गर्ने साथीहरुलाई लिएर वार्ताको समिति बनाउन छोड्दिनुस् । तपाई आउनुस् वार्तामा । तपाई र बद्रिजी बस्नुस् । अरु किन चाहियो ? तर अल्झाउने र भुलभुलैयामा नराख्नुस् ।
९८ प्रतिशत गैर आवाशीय नेपालीहरु यो संस्थाबाट बाहिर छन् । हामीले सिकेको ज्ञान र सिप नेपालमा लगाउन सकिने अथाह संभावना छ । यहाँ हामी केहि गरौं भनेर आएका छौं । त्यसैले बाहिर भएका साथीहरुलाईपनि अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर, स्मार्ट एनआरएन मार्फत जोड्न खोजेका छौं ।
स्मार्ट एनआरएन भनेको देख्दा सानो एप्स जस्तो होइन साथीहरु । भोलि नेपालमा बाढी र पहिरो जाँदाखेरि त्यहाँ भएको ‘डोनेट’ भन्ने एउटा ‘बटम’ थिचेर हामीले दश लाख सदस्य बनाउन सकियो भने त्यसको दुई प्रतिशतले मात्रै १० डलरका दरले दिएपनि २० लाख निकाल्न सक्छौं । त्योपनि एकैछिनमा पैसा जान्छ । अनि ठूलो ठूलो पैसा हुने मान्छेमा हामी किन निर्भर हुनपर्‍यो ? अहिले ३३ करोड हामीले त्यसरिनै उठाएको होइन ? सुका सुका गरेर ।
एकले अर्कोसित संपर्क गर्ने ठूलो माध्यम छ स्मार्ट एनआरएनए भनेको । त्यसैलाई अफवाह फैलाइएको छ । ओ यहाँ धाँधली हुन्छ के हुन्छ भनेर । ‘मेम्बर डजी’ बनाउने, आफ्नै इमेलबाट, आफैंले सदस्य बनेको छ भने कसैको केहि भएको छैन । छ भने ल्याएर देखाउनुस् एक जना । मेरो त कहिं गएको छैन ईमेल । जो सदस्य बन्दैन, अर्काको परिचय पत्रको फोटो खिचेर ल्याउने, आफैं ईमेल खोल्ने, आफैं पैसा तिर्ने, आफैं पासवर्ड प्रयोग गरिदिने अनि पछि ‘मेरो ईमेल खुलेन, एमआइएस सिस्टममा धाँधली भयो’ भनेर हुन्छ ? केहि प्राविधिक असहजता उत्पन्न भएका छन् । यो शुरुको भर्सन १ हो । आइफोन १३ र एक त फरक हुन्छ नी । प्रविधि भनेको परिस्क्रित गर्ने कुरा हो ।
हामीले हामी एकदमै अब्बल, सय प्रतिशतनै सहि छ, समस्या आउँदै आउन्न भनिरहेका छैनौं । सुरक्षा (सेक्युरिटी) लगायतका केहि समस्या होलान् । तर मुख्य समस्या भनेको उम्मेदवारले आफैं पैसा तिर्ने, आफैं ईमेल खोल्ने, आफैं भोट हाल्ने । समस्या त्यो हो । होइन भने सेल्फीलाई तपाईहरुले किन स्विकार गर्नुहुन्न ? सेल्फीलाई स्विकार गर्ने आँट गर्नुस् न त सदस्य बनाउँदा र अहिलेपनि । आफ्नो भोट आफैं हाल्छन् भनेर डराउने ? आफ्नो भोट घर घरबाटै हालिन्छ भनेर डराउने ? काठमाडौंमा मान्छेलाई भगाएर, बल प्रदर्शन गरेर चुनाव जित्न खोज्ने ? यो के खालको रणनिति हो तपाईहरुको ?
(चैत्र ६ गते अर्थात् मार्च २०, आइतवार गैर आवाशीय नेपाली संघ एशिया र अफ्रिका क्षेत्रले आयोजना गरेको अनलाईन कार्यक्रममा एनआरएनए केन्द्रिय महासचिव तथा आगामी कार्यकालकालागि उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. शर्माले ब्यक्त गरेका भनाई मध्ये केहिको संपादित अंश-संपादक)